Pablo na Virginia, nke Marcel Mithois dere. Ntụle dị mkpirikpi | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 24/09/2021 12:00 | Akwụkwọ, Novela, Akụkọ
Enwere akwụkwọ ndị ị na -alaghachi na mgbe niile, m na -emekwa nke a oge ọ bụla m lọtara, Pablo na Virginia, na Marcel Mithois. Ọ bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ, ka ọ dị ugbu a, afọ ma ọ bụ njikọ pụrụ iche, ka na -ebipụta na akwụkwọ ọgụgụ dị mkpa ma ị ga -agụgharị ha site n'oge ruo n'oge. Ịga n'ihu na -agbakwụnye onwe gị n'echiche ahụ na ị ga -ekpori ndụ, nke dịkwa mkpa. Taa ka m na -ekwu maka ya.
2 Mụ na Pablo, Virginia
3 Alụmdi na nwunye paris
4 Na nkenke
Onye odeakụkọ, onye edemede, onye na -ede egwuregwu na onye na -enyocha ihu French, amụrụ na June 15, 1922 na Port Saïd (Egypt) wee nwụọ na Paris na 2012. Onye dere ọtụtụ ọrụ na -aga nke ọma na Jacqueline Maillan dịka Croque-monsieur y Anwụ na-acha anwụ, ọ bụkwa onye na -ede ihe onyonyo maka usoro onyonyo Les Quatre Cents Coups nke Virginie, nke e si na kọlụm ya mee kwa izu Dbọchị France.
N'otu oge ahụ ha nyekwara ya a kọlụm ọchị gịnị bụ Pablo na Virginia, na ihe nwere nnukwu ihe ịga nke ọma. O dere ihe karịrị narị abụọ n'ime afọ anọ n'akwụsịghị akwụsị ma bipụtakwa akwụkwọ ahụ na nhọrọ nke ụfọdụ n'ime ha. Ọbụna ha mere a Ihe nkiri Igwe onyonyo nke a megharịkwara ebe a na enwere ike ịhụ ya TVE na 1968. Ha gụrụ kpakpando na ya Carlos Mendy dị ka Pablo na Conchita Montes dị ka Virginia.
Mụ na Pablo, Virginia
Akụkọ banyere Pablo na Virginia, alụmdi na nwunye ndị Paris na -enweghị ụmụ, bụ akụkọ ihe mere eme nke oge ya - afọ iri isii - nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gosipụtara site na ihe omume ya na ihe ọjọọ. Anyị Pablo na -agwa ha na mmadụ mbụ na ha niile na -ekwu maka Virginia ma ọ bụ kụọ ya, nwanyị nwere agwa pụrụ iche, na -enweghị isi na mgbe ụfọdụ amaghị ihe ọ bụla mana ọ na -atọ ọchị mgbe niile.
Abịara m ha mgbe m chọpụtara ha otu ụbọchị n'ime afọ iri asatọ na ụma m n'elu shelf n'ime ụlọ nke ndị ikwu m na mba. Mkpuchi ya mere ka m buru akwụkwọ ozugbo wee lelee ya. Mgbe ahụ achọpụtara m na ọ bụ onyinye nne m nyere nna m, nke e denyere aha na Círculo de Lectores. Okwu a sitere na 1964. Ewere m ya laa.
Ọ na -esiri m ogologo oge ịgụ ya na ọ bụ otu n'ime mmetụta mbụ m maka ụtọ nke m maka ịgụ na ide ihe olu akụkọ nwoke.
Alụmdi na nwunye paris
Na anya taa Pablo na Virginia Ọ naghị akwụsị ịbụ ịgụ ihe dị ka ihe nzuzu ebe ọ na -enweghị nkọwa karịa ịkpa ọchị na -atọ ọchị nke dabere na agwa ndị na -emegide onwe ha kpamkpam. na ọtụtụ ọnọdụ dabara adaba ma ọ bụ pụrụ iche nke ha metụtara.
La dị jụụ, tụọ na nghọta na -etinye Pablo, onye ọrụ ụlọ ọrụ dị mfe ma dị jụụ, lụrụ Virginia, nwunye ụlọ, hụkwara ya n'anya nke ukwuu. Ọ na -agwa anyị, na ọtụtụ phlegm kamakwa ịhụnanya, ịdị nro na ihe nzuzu, ihe nkiri na -egosi ya, nke bụ ihe megidere ya, mkpebi siri ike, enweghị mkpali na mgbe ụfọdụ amaghị ihe ọ bụla, mana oge niile kpebisiri ike ime ihe ma ọ bụ ime amara. Igodo n'etiti ha abụọ bụ ịdị umeala n'obi maka adịghị ike ma ọ bụ ntụpọ ndị ahụ.
Yabụ, na Ahụmahụ 25 ahọpụtara nke dị n'akwụkwọ ahụ ma kọwaa ya na isi dị mkpirikpi sitere na mgbanwe ya ruo mụta ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ igwu mmiri -abụọ n'ime ihe na-atọ ọchị- ruo mgbe hazie oriri maka ụmụaka enyi ma ọ bụ ọdachi egwuregwu kaadị, mee nwa nwanyi ya na ụfọdụ ụmụaka agaghị ekwe omume ma ọ bụ lekọta nnukwu nkịta (nke na -abụghị) nke enyi ọzọ. Ma ọ na -ekwusi ike Mụta ịgba egwu Ịgba egwu oge gboo ma ọ bụ ịgbagọ, dee akwụkwọ ma gwuo gọlfụ, nke na -akọpụta usoro ọnọdụ dị egwu ma na -atọ ụtọ karịa Virginia na -anwa idozi ya n'ụzọ kacha mma ma ọ bụ dabara adaba.
Enwekwara isi ụfọdụ etinyere njem ezumike ma ọ bụ gị na ndị enyi, dị ka njem ụgbọ mmiri abụọ juputara na -atụghị anya na nghọtahie, na -aga n'ọhịa na di na nwunye ọzọ na tandem ma ọ bụ ọchị ọchị ọbọgwụ na ọzọ n'ime ndị Virginia ahụ na -anwa ịpụ iche na ọha mmadụ.
una karịa ịgụ akwụkwọ dị mfe na enyi nke ahụ nwere ike nweta ikekwe n'ime ụlọ ahịa akwụkwọ nwere ọdịnala ma ọ bụ aka nke abụọ na nke atọ na mbara igwe edemede nke ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Pablo na Virginia, nke Marcel Mithois dere. Obere njikọ
Nieves Muñoz. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede nke Agha Silenced